Kusolwa abokufika ngokungcola kwedolobha | News24
Kusolwa abokufika ngokungcola kwedolobha
USEKELA Ngqongqoshe wezeMvelo uNkk Baraba Thomson usegxeke abantu bokufika ngokungafuni ukulandela imithetho nathe lokho kugcina kulimaza imvelo kuphinde kwandise nokungcola.
UThomson ubekhuluma nabezindaba ngoLwesihlanu olwedlule eChaseValley nalapho kade kuzokwethulwa khona ngokusemthethweni umkhankaso wokuhlanzeka i-Green Deeds Cleaning Campaign.
UNkk Thomson, ozalwa kuleli dobha, uthe ngesikhathi besakhula kwakunezindawo owawusaba ngisho ukuhamba kuzona ngenxa yenhlanzeko kodwa sekunezindawo osaba ngisho ukuhamba kuzona manje ngenxa yokungcola kwazo.
“Kunezinto eziningi ekumele sizibheke ngale nkinga kanti futhi kubalulekile ukuthi silawule abantu bokufika abakuleli lizwe ngokungekho emthethweni, lokho kumele singakufihli. Kulungile bangabafowethu kodwa kumele balandele imithetho yakulelo dolobha ukuthi kwenziwa njalo kulo.Kudala thina sasingakaze nje sibone kosiwa inyama noma yikuphi edolobheni. Thina nje singabantu bemvelo siyabhekisisa ngodaba lokungcoliswa komoya. Asisho ukuthi abangakwenzi ngoba siyazi ukuthi imisebenzi ayikho kodwa akumele benze zonke izinto ezingalungile bahlukumeze imvelo ngoba naku sithi asisebenzi. Singazenza izinto zethu ngendlela ehleleke kakhulu,” kubeka yena.
UNkk Thomson uthe kuningi okusamele kwenziwe kamasipala ukubhekana nale nkinga. Uthe uyazi ukuthi akumele ukuba baqhathanise izikhathi zakudala nezikhathi zamanje ngoba inani labantu abahlala kuleli dolobha selandile kodwa wathi kumele yonke into ibhalanse.
Uphinde wanxusa ukuba osomabhizini nabo badlale indima yabo ukulekelela ukuhlanza idolobha nokugcina imvelo ihlanzekile.
“Osomabhizini akumele bacabange ngokwenza inzuzo kuphela kodwa kumele kubhalanse nokuhlanzeka. Kumele inzuzo kube yinto esekugcineni bacabange ngabantu kanye nemvelo phambili,” kubeka yena.
UThomson akusiyena nje kuphela okhale ngokungcola kuleli dolobha kodwa noNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uDkt Zweli Mkhize ukhale ngokufanayo.